911 Ho an’i Donbass: Fantaro ilay Fampiharana Hanampy ny Okrainiana Hahalala ny Fivoaran’ny Fanafihana Miaramila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Marsa 2017 1:52 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, русский, Ελληνικά, Français, English
Loharano : Vyacheslav Abroskin, Facebook.
Tsy ho ela intsony dia hiasa ao Okraina ny fampiharana iray izay hampahafantatra ireo mpampiasa azy momba ny fanafihana miaramila, ary ao anatin'ny segondra vitsy dia hahafahan'izy ireo mifandray amin'ireo mpampihatra ny lalàna— sady, antenain'ireo mpamorona azy hampihena ny fahafatesan'ireo sivily any amin'ireo faritra rotiky ny ady ao amin'ny fireneny.
Efa ho taona telo eo ho eo, ireo fari-piadidiana ao Donetsk sy Luhansk mandrafitra ny faritra Donbass any atsinanan'i Okraina no nahovitrovitry ny ady miteraka rà mandriaka ifanaovan'ny governemanta Okrainiana sy ireo mpitaky fizakantena tohanan'ny Rosiana izay nitondra ho amin'ny fahafatesana miaramila sy sivily niisa 10.000 mahery ary namindràna olona manodidina ny 1,8 tapitrisa.
Saingy ireo olona 2,7 tapitrisa izay mbola mitohy monina ao an-toerana no antenaina hisitraka ny tombony azo avy amin'ilay fampiharana vaovao “Active Citizen” (olompirenena mavitrika).
“Ny asa voalohany ho an'ilay fampiharana dia ny mampahafantatra ny olona momba ireo daroka baomba sy tranga maika. Ahafahan'ny olona ihany koa mampahafantatra ny polisy momba ireo fanafihana sy mandefa sary hatao porofo ampiarahana amin'ny hafatra alefany,” hoy i Vyacheslav Abroskin, lehiben'ny polisy ao amin'ny faritr'i Donetsk, tao anaty lahatsoratra iray tamin'ny Facebook.
Amin'izao fotoana izao, mamaly ny “antso 102″ ny Unified Analytical Service Center (UASC) ao Okraina—mitovy amin'ny 911 ho an'ny Okrainiana. Vantany vao manomboka ny “Active Citizen”, handray sy hisahana ireo hafatra nalefa avy aminà tablety sy finday avo lenta ny UASC. Ny hany zavatra takiana dia hoe mila mameno mialoha fisoratana anarana fohifohy ireo mpampiasa ny Active Citizen : “…handefa hafatra “SOS” iray ilay mpampiasa, izay hivantana avy hatrany any amin'ny foibenay UASC. Ho haingana be ny fikarakaràn'ny olona ao ny hafatrareo ary hozarainy amin'ny polisy any amin'ny faritra misy anareo, amin'ny alàlan'ny fijerena ny toerana misy ilay fitaovana nandefasana ny hafatra,” hoy ny nosoratan'i Abroskin.
Azo raisina sy idirana any amin'ny faritra maro ao Donetsk sy Luhansk ny WIFI sy ny aterineto finday, hatramin'ny tablety sy ny finday avo lenta, midika hoe maro amin'ireo mponina ao Donbass no hahazo tombony amin'ny Active Citizen.
Misy any amin'ny firenena hafa ny fampiharana tahaka izany, ary hatrany amin'ireo tanàna hafa lehibe ao Okraina. Ohatra, ny rafitra fanairana AMBER any Etazonia dia mandefa fanairana momba ny fakàna ankizy an-keriny manerana ireo fampielezampeo, aterineto ary TV. Hitovitovy mitovitovy amin'izay fampiharana fandefasana fanaizana efa misy ny Active Citizen, na dia ho vitsivitsy ihany aza ny zavatra azo ampiasaina ao anatiny noho ireo fetra teknolojika mahazo ny UASC— farafaharatsiny hatramin'izao iresahana izao aloha. Ireo izay nitroka ilay fampiasa “Active Citizen” ihany no handefasana ny fanairana raha misy daroka baomba, ary ireo fangatahana SOS nalefa avy amin'ilay fampiharana ihany no hokarakarain'ny UASC.
Na izany aza, tsy nilaza mihitsy ireo mpamorona ny Active Citizen hoe rahoviana no eritreretin-dry zao ho tena azo raisina ho ampiasaina ilay fampiharana: “Hatramin'izao, mbola tetikasa mpisavalàlana [andrana] fotsiny aloha io. Raha ny dingana vita, dia mbola ho voafetra ihany ny zavatra azony ampiasaina,”hoy i Abroskin.
Rosia 1 andro izay